Global Voices teny Malagasy » Nifidy Filoha Vaovao i Singapore · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2011 8:21 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Politika
Dr Tony Tan dia voafidy ho Filoha fahafito ao Singapore ny 27 volana Aogositra nefa ny elanelan'ny vato nandreseny dia salan'isa 7,269 fotsiny. Nahangona 35.19 isan-jato tamin'ny fitambaran'ny vato fotsiny izy kanefa dia ampy izany handresena ireo Kandida telo  hafa tamin'ny fifidiana Filoham-pirenena  voalohany tao Singapore tato anatin'ny 18 taona.
Dr Tan dia notohanan'ilay Praiministra Lee Hsien Loong irery ihany . Io Praiministra io dia namoaka  ity fanambarana ity taorian'ny famoahana ny valim-pifidianana :
Tsara ny nananan'ny olona tao Singapore fahafahana hifidy izay ho Filohany, ary hiompana kokoa amin'ny zavatra mikasika ilay Filoha voafidy. Nisaotra ireo Kandida efatra niroso aho.
Ireo mpifidy dia niatrika safidy sarotra teo amin'i Dr Tony Tan sy Dr Tan Cheng Bock. Izany no manamarina ny fahateren'ny elanelan'isa , sy ny antony maha-kely monja ny tombon'isa zara raha iray ampahatelon'ny fitambaran'ny vato rehetra azon'ny mpandresy. Nefa, teo ambanin'ny fihodinana -voalohany- talohan'ilay rafitra , nanome mpandresy iray tsy misy toa azy ilay fifidianana , izay manana ny fahefana ho Filoha vaovao.
Io tenifototra #sgpresident  (Filoha io ) no nibahan-toerana teo amin'ny tontolon'ny twitter tao Singapore. Indreto misy fanehoan-kevitra sy tolo-kevitra ho an'ilay Filoha vaovao :
@patrickpang  : Antenaiko fa @dr_tonytan dia hanohy hibitsika … Ka dia izy no ho Filoha voalohany hibitsika.
@inchchua  : mahatsiaro ho tsy metimety androany niaraka tamin'ny valin'ny fifidianana #sgpresident. Manaporofo indray mandeha indray fa hoe ny saina no zava-dehibe noho ny fo.
@sgelectorate : re fa : SGreans dia nifidy tany amin'ny ministera hafa ; zavatra iray tena tsara niaraka tamin'ny fanambaran'ny reny (fanambaram-pahaterahana).
@BB_See  : Koa dia Singapore, Tsy mihevitra aho fa hilaza izao, nefa, manomboka anio manana 5 taona ianareo hivalozana.
@iamleonwei  : Ny fangalaram-bato dia fanitsakitsahana ny demokrasian'ny firenena koa dia mpifidy 37,000 no tsy tokony ho eo.
Ny bitsika etsy ambony dia mikasika ny vato nangalarina izay tsy voaisa . Nandritra izany , ny elanelan'isa tery teo amin'i Tony Tan, izay notohanan'i Praiministra, dia azo adika ho maridrefin'ny fitontonganan'ny fitokisan'ny vahoaka ny fitondrana iaraha-mitantana.
@mrbrown  : Raha mandresy i Tan Cheng Bock , dia resy i PAP. Raha mandresy i Tony Tan , miaraka amin'io salan'isa io , dia mbola resy ihany i PAP . (fanamarihan'ny mpanoratra : PAP no antoko eo amin'ny fitondràna ao Singapore).
Ity ambany ity ny lahatsary avy ao amin'ny youtube nalefan'ny The Online Citizen  na (ny mponin'ny Aterineto ) momba an'i Dr Tan nanao ny kabarim- pandreseny.
Ny fisainan'ny mpandraharaha mpananihany no mino fa ilay valim-pifidianana dia maneho ny ‘tsy hafalian’  ireo mpifidy ao Singapore momba ny fitantanana ny Firenena.
tsara kokoa ho an'ny PM (Praiministra) ny mamoha ny heviny. Ny ankamaroan'ny mponina ao Singapores dia tsy faly ny amin'ny….
– Fiakaran'ny saram-pitaterana tsy azo hamarinina;
- tsy fahombiazana misesy teo amin'ny fiarovana ny fiaran'ny MRT (fanamarihan'ny mpanoratra: tolotry ny fiarandalamby ) sy toeram-piantsonana;
–Fiezahana hanazavana aminay hatrany ny fomba tokony hifidiananay amin'ny 27 Aogositra;
- ny fandàvan'ny Foibe “Central Mediation” sy ny MinFitsaràna tsy hilaza amin'ny FT fa hoe vahiny ry zareo ireo eto, fa tsy tompony, ka tokony hahay hizaka ,ny kolotsaintsika sy ny fahazarana ara-tsakafontsika;
Mampahatsiahy ny Filoha ny toerana maha-mpampiray ny firenena azy ny Gigamole Diaries:
Io filoha voafidy io dia tsy maintsy mahafantatra fa na teo aza ny fampielezan-kevitra sy fampanantenana tamin'ny fotoam-pifidianana, ny toeranà maha filoha dia mila olona mpitarika mampiray sy manana hevitra . Tokony hiezaka izy ary hampiray ny soatoavintsika izay hitondrana antsika any amin'ny firaisankinan'ny vahoaka.
Nefa ny filoha , hoy ilay bilaogera nanohy, dia tokony tsy hiezaka ny ho fahefana ambonin'ny ara-moralin'ny mponina.
Rehefa mifidy filoha isika, dia taratra eny aminy ny fahefana ara-moraly mba hisahanana ilay toerana avo indrindra eto amin'ny tanintsika , kanefa dia tsy ampy izany hifidianana azy ho mpanapaka ny ara-moralintsika.
AKIKONOMU dia manazava hoe maninona ny toerana maha filoha no tena toeram-boninahitra  :
Tsy mpiambina inon'inona ny filoha
Vantany vao voafidy dia hoe mpitahiry ny (valan-javaboary) soatoavin'i Singapore ny filoha. Ary dia niova ny lalam-panorenana ka lasa ilay filoha no mpitantana ny valan-javaboahary hany sisa nisy. Raha atao bango tokana, mandà tsy manisy hasiny ny dikany hoe toerana maha filoha ny governemanta – Ary na ny mponina ao Singapore sy ireo Kandida ho amin'ny fifidianana/fifantenana fahaefatra aza toa tsy tonga saina ny amin'izany.
Ny tontolon'ny politika dia efa niova , araka ny filazan'i Yee Jenn Jong :
Tena mitaintaina be aho amin'io PE io ary koa tamin'ny fijerena ny fandehan-draharaha satria Singapore dia tonga amin'ny tontolo ara-politika vaovao . Sarotra ny hisaina ny hiverina amin'ilay fifidianana mangina nananantsika fahiny. Raha tsy afaka ny hiverina isika, ny zavatra tsara indrindra hirosoana dia ny famaritana kianja filalaovana ara-politika vaovao hahafahantsika miara-mandroso mba ho tombotsoan'i Singapore. Te handre hevitra hafa azo isafidianana ny mponina. Fa mba hisian'ny hevitra hafa azo isafidianana, dia mila olona mendrika miroso mandray ilay andraikitra. Mitranga izany ankehitriny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/08/21957/
 voafidy : http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/1149594/1/.html
 fifidiana Filoham-pirenena: http://singaporedaily.net/presidential-election-2011/
 The Online Citizen: http://www.youtube.com/watch?v=v28WHCSOcTQ
 ‘tsy hafalian’: http://atans1.wordpress.com/2011/08/27/divining-tonites-results/
 mpampiray ny firenena : http://gigomole.blogspot.com/2011/08/elected-president-will-have.html
 toeram-boninahitra : http://akikonomu.blogspot.com/2011/08/much-ado-about-elected-president.html
 tontolon'ny politika : http://yeejj.wordpress.com/2011/08/27/singaporeans-are-already-winners/